Pridvor nguHaita Land - I-Airbnb
Pridvor nguHaita Land
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguHaita
Inendawo yokuhlala enebalcony, iHaita Land Chalet ikwiVatra Dornei. Le loji inesitiya, izibonelelo zebarbecue, iWiFi yasimahla kunye nendawo yokupaka yabucala yasimahla.
Indawo yokulala ibonelela ngethafa. I-Skiing inokwenzeka ngaphakathi kwendawo kwaye iHaita Land Chalet ibonelela ngendawo yokugcina i-ski.
I-Dealul Negru Chairlift yi-28 km ukusuka kwindawo yokuhlala.
Izibini ngakumbi ziyayithanda indawo - bayilinganisele i-10 kuhambo lwabantu ababini.
Thatha ikhefu kwihlabathi! Yonwabela umhlaba omangalisayo we-Ținutul Haitei kunye neehektare ezinemithi ukusuka kwi-1043 m ukuya kwi-2.102 m ukuphakama kwiiNtaba zeCălimani ezintle. I-Pridvor Chalet yikhabhathi yeentaba zala maxesha eyenzelwe ngabaqambi uSergiu Popa kunye noAna Hodan.
Ikhabhini ineplani yomgangatho ovulekileyo ene:
-Igumbi lokuhlala elibandakanya ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela elibekwe kumgangatho ophantsi
-indawo yokulala ebekwe phezulu.
Ikhabhini ixhotyiswe ngazo zonke izixhobo eziyimfuneko ekhitshini, ukutya okuyimfuneko kunye neziseko ezifana neoli, ityuwa kunye nepepile, iziqholo ezimbalwa, iicondiments, ikofu, iti yezityalo zasekuhlaleni njl. ihlanjwe ngokutsha kwaye iguquguquke.
Ibhedi & neBhafu:
Igumbi lokulala linebhedi epholileyo yenkumbulo. Igumbi lokuhlambela lineshawa yokuhamba (akukho tub) kunye nezinto zangasese kunye nezongezelelekileyo onokuzifuna.
Umhlaba waseHaita awunamithi kwaye ubuyela kwihlathi lesizwe. Kukho indawo yomgangatho kunye neveranda enemibono emangalisayo.
Ngenxa yemibandela emininzi yangaphambili, izilwanyana zasekhaya azivumelekanga. Ukuba uzisa isilwanyana sasekhaya, uya kucelwa ukuba usishiye ngaphandle okanye ngenye indlela uhambe ngaphandle kwembuyekezo.
PS: Kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide Ținutul Haitii sinenye indlwana elungele iindwendwe ezi-2-3 ukuba ufuna ukuyibhukisha indawo encinci/ esondele kakhulu okanye ukuba ufuna ukubhukisha bobabini ungalibazisi ukudibana nathi. Okwangoku ungajonga enye ku: Sihastru nguHaita Land.
Umbuki zindwendwe ngu- Haita